Golaha Shacabka oo ansixiyey xeerka saxaafadda oo ay dib-u-eegis ku wadeen – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo ansixiyey xeerka saxaafadda oo ay dib-u-eegis ku wadeen
Golaha shacabka ee baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay dib u eegista xeerka saxaafadda, kaas oo goluhu akhrinta labaad mariyay sabtidii.
Golaha ayaa lahaa kulanka 24raad ee Kalfadhiga Shannaad.
Baarlamanka wuxuu ansixinta ka hor dood kooban ka yeeshay wax ka bedelka iyo dib-u-eegista xeerka meelaha qaar ee xeerka, waxayna xildhibaanadu ku taliyeen in la xisaabtanka saxafiyiintu inuu noqdo mid aan ka hor imanayn shuruucda xeerarka kale ee dalka iyo in xeerku uu si buuxda u dhawro xuquuqda saxafiyiinta.
Weriyaha Kalfadhi ee golaha wuxuu ku soo waramayaa in 139 mudane in ay ansixiyeen xeerka waxaana aamusay hal xildhibaan.
Ururada saxaafadda ayaa walaac weyn ka qaba wax ka bedel ay sheegeen in lagu sameeyay qaybo muhiim ah oo ka mid ah xeerka iyagoo aan laga tala-gelin meelaha qaarkood oo ay ahayd in talo la geliyo.
Waxay saxaafaddu ku andacoonayeen in qodobo cusub oo ay tahay in wax laga ogaado ka hor ansixinta lagu daray xeerka.
Gudoomiyaha golaha Shacabka oo tegay degmada Xudur ee gobolka Bakool
Golaha wakiillada Puntland oo canshuuro adag ku soo rogay kunteenaradda iyo badeecadaha kale ee ka yimaada Berbera